China metal metal zọ factory na-emepụta | Ebute ụzọ
Wuxi Lead metal zọ ọrụ agwakọta ahụmahụ nke anyị toolmakers na anyị raara onwe anyị nye àgwà na-emepụta akụkụ na reliably izute anyị ahịa 'ọkọlọtọ. Iji ngwa oru na-aga n’ihu na ngwa ọrụ nke abụọ iji mepụta obere na nnukwu akụkụ
Wuxi Lead metal zọ ọrụ agwakọta ahụmahụ nke anyị toolmakers na anyị raara onwe anyị nye àgwà na-emepụta akụkụ na reliably izute anyị ahịa 'ọkọlọtọ. N'iji ngwa oru na-aga n'ihu na ngwa ọrụ nke abụọ iji mepụta obere na akụkụ buru ibu, anyị nwere ike ịnye ngwa ngwa ntụgharị na prototypes na mmepụta ọsọ.
Metal zọ bụ a n'ichepụta usoro iji tọghata ewepụghị metal Ibé akwụkwọ n'ime kpọmkwem shapes. Ọ bụ usoro dị mgbagwoju anya nke nwere ike ịgụnye ọtụtụ usoro imepụta ọla - ịkọ ọkpọ, ọkpọ ọkpọ, ekwe na ịkpọpu akụkụ, ịkpọ aha ole na ole.
Ngwongwo ígwè bụ usoro nhazi nke oyi na-eme ka ojiji nke ịnwụ anwụ na ịpị ígwè iji gbanwee mpempe akwụkwọ dị iche iche. Iberibe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, nke a na-akpọkarị oghere, na-eri nri n'ime mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke na-eji ngwá ọrụ ma nwụọ n'elu iji mepụta ọla ahụ n'ụdị ọhụrụ. Facilitieslọ ọrụ na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ígwè na-enye ọrụ stampụ na-etinye ihe a ga-azọpụta n'etiti akụkụ ndị nwụrụ anwụ, ebe ojiji nke nrụgide na ịkwaa ihe ahụ n'ime ọdịdị ikpeazụ achọrọ maka ngwaahịa ma ọ bụ akụkụ.
Anyị na-enye ọrụ ntanetịime ígwè iji wepụta akụrụngwa maka ụlọ ọrụ na ụgbọ ala, aerospace, ọgwụ, na ahịa ndị ọzọ. Ka ahịa ụwa na-agbanwe, enwere mkpa dịwanye mkpa maka imepụta ngwa ngwa nke akụkụ dị mgbagwoju anya.
Metal zọ bụ a ngwa ngwa na-eri-irè ngwọta maka nke a nnukwu-ibu n'ichepụta mkpa. Ndị na-emepụta ihe chọrọ akụkụ ọla edobere maka ọrụ na-achọkarị àgwà atọ dị mkpa:
Aluminom, ígwè, igwe anaghị agba nchara, ọla, ọla kọpa, obere carbon nchara, wdg
Site na otu mpempe akwụkwọ na mpịakọta iri-nde nde kwa afọ.
CNC machining, CNC igwe, CNC na-atụgharị, Mpempe akwụkwọ, Emecha, Akụrụngwa, wdg
Osote: Mpempe akwụkwọ metal